Usoro Nazca, akụ dị na Peru | Akụkọ Njem
Otu n'ime akụ dị iche iche nke Peru bụ Usoro Nazca. Ha masịrị m kemgbe m bụ nwata n’ihi na ha na-anọchite anya ya ihe omimi na ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta ihe ochie gbalịrị ịkọwa, ọ ka nwere ọtụtụ ndò. M na-echeta nna m na-agụ akwụkwọ Erich Von Däniken, laa azụ na 70s, na otu m siri hụ akụkọ ndị ahụ n'anya ya mere enwere nnukwu ebe dị m n'obi maka Peru na ihe ịtụnanya ya.
Usoro Nazca Ha bụ geoglyphs, eserese na ala, meela agadi. Emere ha site na omenala Nazca ma ha mejuputara otu otutu onu ogugu di iche iche, di mfe ma di nkpa. Ha bụ Ihe Nketa Worldwa na otu n’ime ebe njem gị na Peruịs doro anya na-atụgharị uche.
1 Njirimara nke usoro Nazca
2 Gaa Leta Nazca Lines
3 Ndụmọdụ maka ileta usoro Nazca
4 Kedu ihe ọzọ ị ga-eleta na Nazca
Njirimara nke usoro Nazca
Usoro Nazca bụ ahịrị esere ya na ala nke mejupụtara uhie na ojii. Ha na-agbatị karịa Ogologo kilomita 500 nke eluhey nọ Kilomita 450 site na Lima, isi obodo Peruvian, na ala ndị Nazca, Palpa, Socos na Ingenios. Ahịrị ndị a dịgasị iche n’ogologo na nke kachasị ogologo nwere ike iru mita 275. Enwere akara na ọnụ ọgụgụ ndị na-anọchite anya anụmanụ, labyrinth, mmadụ, osisi na ọbụna eserese geometric.
na ọnụ ọgụgụ kachasị akara ngosi nke ahịrị ndị Nazca bụ nke anụmanụ: enwere a 27 mita whale, otu kreenu, otu azu mmiri, nke ama ududo, ụfọdụ nnụnụ ihe karịrị 200 mita ogologo, ụfọdụ ihe ndi ozo. Eserese ahụ dị na mbara ala na nrịgo ma mgbe ejiri nlezianya lelee ya, ọ dị iche na na mkpọda bụ tumadi mmadụ efu ma n’agbanyeghi na otutu onu ogugu enwere ike mata na ha nwere ufodu ndi ozo nke ezi ihe ha n’atu n’uche bu.
Na usoro ndị Nazca enwere ọtụtụ eserese geometric karia nke anumanu na mmadu. Ọtụtụ narị na narị otu narị ahịrị, gburugburu, triangles na n'ámá nke akara ya adighi adapu ihe kariri centimita iri ato n'ime ala, mana ekele diri onodu ubochi a di na Peru, ha ka di. Ọ dịtụghị mgbe mmiri na-ezo! Tụkwasị na nke ahụ, ala nwere ọtụtụ nkedo na ihu igwe dị ọkụ, nkezi okpomọkụ nke afọ bụ 30 ºC, na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na-eme dị ka ihe mkpuchi ma gbochie, yana ihe ndị ọzọ, nkwụsị nke ahịrị.
Gaa Leta Nazca Lines
Anyị kwuru n'elu na usoro ndị Nazca dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 500 site na Lima ma na-atụle na e nwere akụ ndị ọzọ na mba ahụ, a ghaghị ịhazi ụzọ ahụ. Otu nhọrọ bụ ịkpọ otu tour gụnyere nyefe na a sinik ụgbọ elu n'elu ahịrị, doro anya. E nwere ọtụtụ ndị njem njem ụlọ ọrụ na-enye yiri njegharị.
Enwere ike inye, site na nleta nleta Peru, dịka ọmụmaatụ, ụbọchị abụọ na otu abalị ma gụnye Usoro Nazca na Paracas. Firstbọchị mbụ ebugharị gị site na Lima gaa ọdụ ụgbọ elu Nazca dị na mpaghara iji fefee ala, ma ọ bụrụ na ihu igwe dị mma. Abalị na-anọru na Posada del Emancipador mara mma ma n'echi ya anyị ga-aga Paracas si na nke anyị si na ya pụọ gaa na Ballestas Islands na njem ụgbọ mmiri were awa abụọ. Ọ bụ ebe Paracas Reserve dị, nnukwu ogige anụ ọhịa dị n'ụsọ oké osimiri na ọtụtụ puku nnụnụ na-akwaga ebe ọzọ. Na njem ahụ, na mkpọda nke dị n'ụsọ oké osimiri, ị nwere ike ịhụ Candelabro, nke ọzọ bụ geoglyphs ndị Peruvian kacha mara amara.
Agencylọ ọrụ ọzọ bụ Nazca Flights. Enyele dị iche iche ụgbọ elu n'elu Nazca site na Pisco, Nazca na Ica. Ọ bụ ihe amamihe dị na akwụkwọ ruo otu ọnwa tupu oge eruo iji hụ ebe gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụgbọ elu si Ica na Pisco, nke bụ ndị nwere nnukwu mkpa. Site na Nazca, enwere ohere maka ụgbọ elu. Kedu ka njegharị ndị a? Ihe dị ka euro 100 ị nwere ụgbọ elu nkeji 35 na mpaghara Nazca ma hụ iri na abụọ nke ahịrị dị n'etiti ududo, shark, whale, osisi na astronaut a ma ama. Ndị ọrụ gị na-akpọrọ gị na họtel na Nazca ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ ala. Gbọ elu ndị a nọ n'ụgbọ Cessna 206 na ọnụego ahụ gụnyere euro 10 ma ọ bụ 11 nke ụtụ isi ọdụ ụgbọ elu.
Un ịgagharị na Nazca na Palpa ọ dị ọnụ karịa ma dị ihe dị ka euro 200. The flights are over the Nazca Lines and over the more adịbeghị anya chọpụtara Palpa edoghi na Ọdụ mmiri Cantalloc. Gbọ elu a bụ nkeji 55 n'ụgbọ Cessna 206 ma n'ihe banyere ọwa mmiri, a na-eleta ha site na ala. Njegharị ahụ na-enye na Nazca na-aga n'ihu na ọpụpụ si Pisco na Ica na ọnụego 290 euro na 270 euro n'otu n'otu.
Ndụmọdụ maka ileta usoro Nazca
You nwere ike mgbe niile banye maka a tour na ọ bụrụ na ọ bụghị na ị nwere ike gbazite ụgbọ ala ma jikọta Lima na obodo Nazca na ebe ahụ goro otu n’ime ụgbọ elu ndị a nke m kọwara n’elu. Enwere ike ime ya ozugbo site na Lima ma ọ bụ gaa bọs gaa Nazca ma mee otu ihe ahụ. Bọs ahụ na-ewe ihe dị ka awa asatọ. I nwekwara ike ịga Lima ka Ica na mkpumkpu njem na ofufe si Ica. Ọ bụrụ na ịnweghị oge dị ukwuu, njem a dị mma ma gbakwunye nleta na Ballestas Islands, Oasis Huacachina na ụfọdụ wineries mpaghara.
Site na Cusco ị nwekwara ike ịga Nazca na otu ihe ahụ site na Paracas na Huacachina. Enwere ụgbọ elu-hop-bus, ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ na-enye gị ohere ịbanye ma pụọ ​​n'ọtụtụ ebe ma ị nwere ike ịgụnye ụlọ oriri na ọ hotelsụ andụ na ụlọ mbikọ na ọnụego. Na-agafe ụgbọ elu n'elu Nazca ị nwere ike ịbịaru, site na ala, elele anya Nazca Lines na ụzọ Pan-American. Ọ naghị enye gị echiche kacha mma niile, naanị ahịrị ole na ole, mana ọ bụrụ na ịga obere oge tupu anyanwụ adaa ọ bụ kaadi ozi mara mma.
Kedu ihe ọzọ ị ga-eleta na Nazca
Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ime na Nazca? Nazca abụghị nnukwu obodo ka anyị wee nwee ike iji ụkwụ jiri ụkwụ na-enyocha ya. N'etiti ebe ndị njem nleta ndị ọzọ anyị nwere ike ịga Maria Reiche Observatory nke ahụ na-arụ ọrụ na Ahịrị Nazlọ Ahịa Nazca, bụbu ebe obibi nke ọkà mmụta ihe ochie Reiche bụ onye mụrụ usoro ndị a dị omimi ruo ọtụtụ iri afọ.
I nwekwara ike gaa na Chauchilla na-eli ozu, na mpụga obodo, nke tupu Inca ọdịbendị, na kwa Nazca ọwa mmiri nke ahụ ka, ọtụtụ narị afọ gara aga, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Ihe Ọwa mmiri Cantalloc Ọ bụ naanị kilomita ise site na obodo ahụ, nkeji 15, nnukwu ọrụ nke slabs na ndekọ na-kwesịrị ileta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Peru » Usoro Nazca, akụ dị na Peru
Usoro Nazca, otu n'ime isi njem nleta na Peru. Obi abụọ adịghị ya, n'akụkụ ọ bụla nke Peru ị ga-ahụ ihe ọhụrụ ịnụ ụtọ ya. Iji maa atụ, na Arequipa canca canca, Cusco (Machu Picchu, Sacred Valley nke Incas, Ugwu nke 7 Colours ma ọ bụ Vinicunca, Humantay lagoon), Puno (Lake Titicaca, Chulpas del Sillustani) Huuf n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Obi abụọ adịghị ya na Peru na-enye njem nlegharị anya zuru oke ọkacha mmasị.
Choquequirao mee njem dijo
Usoro Nazca bụ ihe omimi dị omimi na esere n'ọzara, ọ bụ otu n'ime enigmas nke ihe ochie kachasị n'ụwa niile. Ihe magburu onwe ya na akara ngosi zuru oke nke ndị Nazcas mepụtara. Nakwa ebe a, e nwekwara ọtụtụ ebe a ga-eleta dịka: Machu Picchu, Choquequirao, ihe ndị na-adọrọ adọrọ dị ka Vinicunca (ugwu nke 7 agba (), Humantay (Lagoon Turquoise), n'etiti ọtụtụ ebe nkiri ndị ọzọ.
Zaghachi Choquequirao Trek
Mgbe ndị njem ala nsọ bịarutere Santiago de Compostela